Mliswa Praises Chamisa, Calls Him Unstoppable » 263Chat
By Shorai Murwira On Mar 6, 2018
Norton Member of Parliament, Temba Mliswa has showered praises on the Movement for Democratic Change, (MDC-T) leader and his Generational Consensus project labeling it unstoppable and real threat to the ruling Zanu PF in the 2018 elections.
Mliswa who appear to have been charmed by Chamisa’s ascendancy since the death of Morgan Tsvangirai appeared in a video posted on social media heaping praises on the MDC Alliance candidate saying the ruling Zanu PF will have to pull up if they are to conquer Chamisa’s unstoppable project.
“Trying to stop the MDC-T generation approach is like you trying to stop a wave with your hands, which you cannot succeed of doing,” said Mliswa.
Mliswa said Chamisa’s vibrancy and charisma had no match in Zanu PF, “There is no young person in ZANU PF who is as vibrant and as charismatic as Chamisa, and Chamisa will go strait to Mnangagwa because there is no one of same age with him to block.”
Chamisa shrugged competition from vice Presidents Elias Mudzuri and Thokozani Khupe to land the coveted position of MDC-T President, earning the right to represent the MDC Alliance in the 2018 elections.
Emerson MnangagwaNelson ChamisaRobert MugabeTemba Mliswa
Zimplow Declared US$300K Dividend